व्यवसायिक टान बनाउन अध्यक्षमा मेरो उम्मेद्वारीः शेर्पा | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अन्तर्वार्ता » व्यवसायिक टान बनाउन अध्यक्षमा मेरो उम्मेद्वारीः शेर्पा
पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । नुरु जाङ्बु शेर्पा, इन्टरनेशनल शेर्पा एड्भान्चरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी अहिले टान निर्वाचनका लागि अध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् । २८ वर्षदेखि निरन्तर पर्यटन क्षेत्रमा कृयाशील उनी पर्वतारोहण र पदयात्राका हिमायतीको रुपमा चिनिन्छन् । आरोहीहरुको रुपमा समेत परिचित सोलुखुम्बू निवासी शेर्पाले टान निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रुपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ । दुई प्यानलसहित अध्यक्षका लागि भिडिरहेको सन्दर्भमा शेर्पाले किन अध्यक्षकै लागि उम्मेद्वार दिए त ? पर्यटनन्यूजसँगको विशेष कुराकानी ः
टान निर्वाचनमा तपाईंको उम्मेद्वारी किन ?
टान व्यवसायीहरुको संगठन हो । तर, हिजोआज यो संस्था कुनै राजनीतिक दलको संगठन जस्तो भयो । व्यवसायीले नेतृत्व लिनु पर्ने ठाउँमा पार्टीका झण्डा बोकेर जानेहरुको संख्यामा क्रमशः वृद्धि हुन थाले । टान अध्यक्षका लागि टिकट लिनु भनेको कुनै दलको सभासद्को टिकट लिए जस्तो भयो । व्यवसायीक व्यक्तिहरु टानमा जानै नपाउने, जानको लागि विसौं लाख रुपैयाँ खर्चनु पर्ने, राजनीतिक प्रोफाइल बनाउन टानमा जानु पर्ने जस्ता गतिविधि बढेका कारण मैले यी सबै विकृतिहरुको अन्त्य गर्न आफ्नो उम्मेद्वारी दिएको हुँ ।
तपाईंको चुनावी एजेन्डा चाहिँ के ?
सबैभन्दा पहिला टानलाई राजनीति मुक्त बनाउनु पर्यो । त्यसपछि त्यहाँ भित्र हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पर्यो । राजनीतिक भागवण्डा गरेर जाँदा टानमा कहिलै पनि व्यवसायी एकता भएन । तसर्थ, टानलाई एउटा व्यवसायीको संस्था बनाउने मेरो मुख्य एजेन्डा हो । यस भित्र पारदर्शीता, समावेशिता, पर्यटनका विकासका धेरै कुराहरु छन् ।
तपाईं खुम्बू गाउँपालिकाकै स्थानीय हुनुहुँदो रहेछ । दोहोरो कर प्रणालीको विषयमा के हो राय ?
तत्कालको तत्कालै दोहोरो कर प्रणली गर्नु हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको अवस्था र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको सन्दर्भमा आफ्नै खुशीले स्थानीय तहले कर उठाउनु हुँदैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जाने भन्ने त हो । तर, त्यो पूर्णत कार्यान्वयन भइ नसकेको अवस्थामा खुम्बू गाउँपालिकाले गरेको यो निर्णय त्यत्ति पाको भएन । यसलाई रोक्नु पर्छ र कानून बनेपछि मात्र कार्यान्वयन गराउनु पर्छ ।
टानमा टिम्स विवाद पनि छ नि ?
यो विवादको विषय मैले बुझेको छु । यदी मेरो नेतृत्वमा टान कार्यसमिति निर्माण भयो भने मैले यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गराउँछ । पर्यटन बोर्ड र टान दुई ठाउँबाट टिम्स वितरण गर्ने नै होइन । पारदर्शीताका लागि र झन्झट मुक्त गराउनको लागि टिम्स टानबाट मात्र वितरण हुनु पर्छ । बोर्डसँगको सहकार्य र समन्वय छुट्टै कुरा हो ।
टपाईं टान निर्वाचनका लागि टिम चाहिँ किन बनाउनु भएन ?
छोटो समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र अन्तसम्म व्यवसायिक टान निर्माण गर्ने छलफलमा लाग्दामै समय वित्यो । अन्ततः टान व्यवसायीको नभइ राजनीतिक संगठनको हुने डरले मैले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको हुँ ।
तपाईंलाई समर्थन चाहिँ ककस्को छ त ?
मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो समर्थन भनेकै व्यवसायीहरुको छ । जस्ले, टानमा राजनीति मन पराइरहेका छैनन् र टानलाई विश्वद्ध व्यवसायीहरुको संस्थाको रुपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यवसायीको समर्थन मलाई छ । अर्को पक्ष शेर्पा समुदायको ठूलो समर्थन मलाई नै छ । यसका अलवा, स्वतन्त्र व्यवसायी र पर्यटनमा कृयाशीले सबै पार्टीमा आबद्ध युवा व्यवसायीहरुको समर्थन मलाई छ । र, दुबै टिमबाट असन्तुष्ट बनेका व्यवसायीहरुले पनि मलाई समर्थन गर्नुभाछ ।
अध्यक्षमा तपाईंले जित हाँसिल गर्नुभयो भने काम चाहिँ कसरी गर्न सकिएला त ?
म स्वतन्त्र व्यवसायीक उम्मेद्वार भएको हुँदा जुन समुहसँग पनि मिलेर काम गर्न मलाई समस्या छैन । मैले चाहेको लिडर व्यवसायीक हुनु पर्यो भन्ने हो । सबै साथीहरुसँगको मेरो सम्बन्ध र सहकार्य राम्रो भएकाले मलाई निर्वाचनमा जित पछि काम गर्नु कुनै समस्या नै छैन ।
व्यवसायिक टान बनाउन अध्यक्षमा मेरो उम्मेद्वारीः शेर्पा Reviewed by Shiva Shrestha on Oct 27 . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । नुरु जाङ्बु शेर्पा, इन्टरनेशनल शेर्पा एड्भान्चरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी अहिले टान निर्वाचनका लागि अध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् । २८ व पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । नुरु जाङ्बु शेर्पा, इन्टरनेशनल शेर्पा एड्भान्चरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी अहिले टान निर्वाचनका लागि अध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् । २८ व Rating: 0